स्पेनको मौसम परिवर्तनको जोखिममा पर्ने उपायहरू नेटवर्क मौसम विज्ञान
स्पेनको मौसम परिवर्तनको जोखिमपूर्णताको विरूद्धका उपायहरू
धेरै चोटि हामीले स्पेनलाई मौसम परिवर्तनको सबैभन्दा जोखिममा पर्ने देशहरूको रूपमा राखेका छौं। स्पेनलाई कमजोर बनाउने पहिलो कुरा भनेको यसको भौगोलिक स्थान हो। दोस्रो र कम से कम, यो यसको मौसम हो।
मौसम परिवर्तन रोक्न को लागी, सबै राजनीतिक र आर्थिक उपायहरुको अध्ययन गर्न को लागी परिणामहरु अनुकूलन वा कम गर्न को लागी आवश्यक छ। स्पेनले मौसम परिवर्तनको यति जोखिममा पर्ने के गर्न सक्छ?
अन्तिम आगो ग्यालिसियामा दर्ता भयो हरितगृह प्रभाव को बृद्धि गर्न योगदान, ठूलो CO2 उत्सर्जनका कारण। स्पेनमा मौसम परिवर्तनको नतिजा रोक्न वैज्ञानिक समुदायबाट राजनीतिज्ञलाई समाधान आवश्यक छ जसले वातावरण, मात्र आर्थिक र राजनीतिक पनि देखाउन सक्दछन्। यी समाधानहरू एक कुशल र आर्थिक तरिकामा जलवायु परिवर्तनको प्रभावहरु लाई अनुकूलन र / वा शमन उपायहरु मा रूपान्तरण।
1 नवीकरणीय ऊर्जाहरू
2 मौसम घटनामा परिवर्तन
मौसम परिवर्तनको प्रभावहरु लाई कम गर्नका लागि पहिलो कुरा भनेको हरितगृह प्रभावमा बृद्धिलाई कम गर्नु हो। हामी त्यो कसरी गर्छौं? प्रदूषक ग्यासहरूको उत्सर्जन घटाउँदै उद्योगहरु र यातायात मा जीवाश्म ईन्धन को जला को रूप मा गतिविधिहरु बाट।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो आर्थिक, कुशल र प्रतिस्पर्धी विकल्प नवीकरणीय उर्जा हो। आज नवीकरणीय उर्जाहरू कोइला वा तेल जत्तिकै प्रतिस्पर्धी छन्।
मौसम परिवर्तनले कृषिलाई पनि असर गरिरहेको छ र हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो के हुन्छ यसमा कार्य गर्न सक्षम हुन।
मौसम घटनामा परिवर्तन
हामीलाई थाहा छ, जलवायु परिवर्तनले मौसमको घटनाको तीव्रता र आवृत्तिलाई असर गर्दछ जस्तै मुसलधारे वर्षा जसले बाढी वा सूखा निम्त्याउँछ। ग्रहमा ती ठाउँहरूमा जहाँ यी सर्तहरू पहिले नै अवस्थित थिए, प्रभावहरु अधिक स्पष्ट हुनेछ।
समुद्री तटवर्ती क्षेत्रहरुमा उही उसको दृष्टिकोणमा सत्य हो। सबैभन्दा बढी प्रभावित व्यक्तिहरू ती हुन् जो समुद्री तटमा पानीको नजिकै बस्छन् र दुबै खराब मौसम र समुद्री सतह बढ्दै जाने क्रममा सबैभन्दा बढी जोखिम हुन्छन्।
समाधान भनेको अन्वेषकहरूलाई तालिम दिने हो ताकि जलवायु परिवर्तनका सबै परिणामहरू अधिकतम पूर्वानुमान गर्न सकियोस् यसमा अनुकूल हुन।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम परिवर्तन » स्पेनको मौसम परिवर्तनको जोखिमपूर्णताको विरूद्धका उपायहरू
मरुभूमि विरूद्ध सहारा को महान हरियो पर्खाल
ग्रीन हाउस ग्याँसलाई ढु stones्गामा रूपान्तरण, ग्लोबल वार्मिंग रोक्न एक प्रभावकारी उपाय